भारी मात्रामा घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कती पुग्यो त ? – ramechhapkhabar.com
भारी मात्रामा घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कती पुग्यो त ?
साताको तेस्रो दिन मंगलबार सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य तोलामा तीन सय रुपैयाँले घटेर ८६ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
सोमबार छापावाला सुनको मूल्य तोलाको ८७ हजार रुपैयाँ थियो। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा पनि तीन सय रुपैयाँले घटेर ८६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा १० रुपैयाँले घटेर १२ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।
चिनियाँ जहाज हटाउने निगमनको तयारी, अमेरिकी कम्पनीलाई बिक्री गरिँदै बोइङ ७५७-२००
निगमले पहिलो र दोस्रो लिलामी प्रक्रियामा विमान बिक्री हुन नसकेपछि तेस्रोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तेस्रोपटकको प्रयासमा भएको लिलामी प्रक्रियामार्फत् निगमले उक्त विमान बेच्‍ने निर्णय गरेको थियो । उक्त कम्पनीले गत साउनमा भएको पहिलो चरणको सम्झौतापछि निगमलाई पाँच प्रतिशत बैनासमेत बुझाइसकेको थियो ।
दोस्रो टेन्डरमा पनि विमान बिक्री नभएपछि कार्नूनले आपसी छलफलबाट विमान बेच्‍ने सुविधा दिएको थियो । सोही नियमभित्र रहेर निगमले ५.७१ मिलियन अमेरिकी डलरमा उक्त विमान बेच्ने सम्झौता गरेपनि कोरोनाको कारण प्रक्रिया टुंगिन सकेको थिएन । अहिले उक्त जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै ग्राउन्डेड अवस्थामा छ ।
‘पछिल्लो आठ महिनादेखि उक्त कम्पनी निरन्तर सम्पर्कमा थियो र पटकपटकको ताकेतापछि सिएसजिएसलाई अन्तिम सम्झौता पठाइसकेका छौं’, पौडेलले भने । सन २०१९ जुन २६ मा ४५ दिनको समय दिएर पहिलो बोलपत्र आह्वान गरेको निगमले त्यसमा परेका तीनवटै कम्पनीले निगमले चाहेको मूल्य तिर्न तयार नभएपछि दोस्रोपटक २०१९ कै अगस्तमा पहिलो साता १५ दिनको समय सीमा राखेर पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।